Izindaba - Imininingwane yokugcinwa nokunakekelwa kwekheji ye-cage
Imininingwane yokugcinwa nokugcinwa kwe-cage welder
Umbuzo 1: Singakunciphisa kanjani ukugqokwa kwe- ikheji le-welder?
1. Kujwayelekile ukuthi abakhiqizi bemishini ye-cage welding bagqoke izingxenye ngenkathi besetshenziswa. Ukuze sinciphise ukugqoka phakathi kwezingxenye, kufanele sinake imininingwane, ukuze ukusebenza kweyezinyoni umshini Welding ingasetshenziswa, futhi abasebenzi abasebenza yezinyoni umshini Welding udinga ukujwayelana nokusebenza komshini ngobuciko, ukuqonda ukusebenza nokusebenza kwenqubo yomshini, futhi ingaxazulula inkinga ngesikhathi lapho umshini ungavamile, ukuze kuqinisekiswe impilo yensizakalo yomshini wokufaka i-cage.
2. Ngesikhathi sokusebenza komkhiqizi womshini we-cage welding, landela ngokuqinile izinqubo futhi uvimbele ukulayishwa ngokweqile, okungeke kukhulise kuphela ukugqoka phakathi kwezingxenye kepha futhi kusheshise nomonakalo womshini we-cage welding.
3. Lapho usebenzisa uhlelo yezinyoni umshini Welding, akuvunyelwe ukusheshisa isivinini sokukhiqiza ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle komsebenzi, okuzodala ukuwohloka okuhlobene nomshini futhi kuthinte isikhathi sokuphila somshini.
Umbuzo 2: Ungakugwema kanjani ukwehluleka komshini wokufaka i-cage ngesikhathi sokusebenza?
1. Okokuqala, opharetha be- yezinyoni umshini Welding umkhiqizi kufanele abe nobuchwepheshe obuchwepheshile, futhi angajwayela ukusebenza komshini we-cage welding, futhi angaxazulula inkinga ngesikhathi lapho kwenzeka khona isimo esingajwayelekile, ukuze kugwenywe ukulimala komshini we-cage welding.
2. Yenza umsebenzi wokuhlola ngaphambi kokusebenza ngaphambi kokusebenzisa i-cage welder, ubheke ngokucophelela ukuthi ngabe isiteshi ngasinye nengxenye ngayinye kusendaweni ejwayelekile yokusebenza yini, bese ubika noma ikuphi ukungahambi kahle ngesikhathi.
3. Umsebenzi omningi ngokweqile awuvunyelwe ngesikhathi sokusebenza kwekheji. Umsebenzi wokugcwala ngokweqile awuzukukhulisa kuphela ukugqoka phakathi kwezingxenye, kepha futhi kungadala umonakalo kumshini wokufaka ikheji.
4. Emsebenzini wansuku zonke, yezinyoni umshini Welding abakhiqizi badinga ukugcina umshini we-cage welding njalo, ukuze unwebe impilo yesevisi futhi unciphise ukuvela kokwehluleka.
Lokhu okungenhla kuyimibuzo embalwa umakhi womshini wethu wokufaka ikheji ohlelele yona. Ngithemba ukuletha usizo olwengeziwe. Uma ngabe le ndatshana ingakuxazululanga ukungabaza kwakho, ungashiya ngqo umyalezo kuwebhusayithi ukusitshela, abasebenzi bethu bazonquma Sizokuphendula ngesikhathi, siyabonga ngosekelo lwakho.
Izinqola Zokuhamba, U Bolts, Isakhiwo Bolts, I-Hex Bolts, Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine, Ama-Lag Bolts,